Qurba joogeey Naga xishooda, haddii kale!!!. | STN Somali
Home Wararka Qurba joogeey Naga xishooda, haddii kale!!!.
Waxa uu goostay in uu shaqo ka doonto Gobalkii uu u dhashay, Magaala Madaxda waxaa joogay Madaxweynaha “Reerka land” oo Holland ka yimid, inta badan Xafiisyadana waxaa joogay Dad Jaakado wada wato oo Bidaar leh. Waxa isku qaban waayay Cimiladda Kuleeylkeeda iyo Jaakadaha. iyo Dadka Magaaldu Hidda ahaan DNA kuma badneeyn Dad Bidaar leh. waxa uu tagay dowlada hoose, waxa uu ugu tagay Xiriiriyaha Bushashka iyo Cooshashka oo ah Gabar Germalka ka timid Iyo Madaxa Kawaanada Gowraca Xoolaha oo ah khabiir Sweden ku qali jiray Digaaga.
Waxa uu u sii gudbay Degmadii, waxa uu ugu tagay Saldhiga Police-ka Nin Jeneral ah iyo 6 wiil oo Police-ka Tolka ah, Taliyihii ayaa yiri: “Home security of US” ayaan muddo ka soo shaqeeynayay, waxaana ka mid ahaa “American Marines”.
Waxa uu u gudbay Tuuladii Asal ahaan uu ka soo jeeday, waxa uu la kulmay iyada oo Tolka loo duubayo Ugaas Cusub oo Usbuuc ka hor ka yimid Dalka Norway oo leh waxaan soo bartay “Clan conflict reconciliation” sida loo xaliyo khilaafka Qabiilada, in kasta oo Tuulada ey lo’ badani joogtay Haddana waxaa Duubka cusub lagu shubayay Caanaha “Al-Maraaci” ee Lo’da Sucuudiga, Caruurtana waxaa loogu labisay Qamiisyo ey keentay “Qatar Charity”.
W/Q Yaxye Camir
Previous articleDad Shacab ah oo ay Ciidamada Dowlada Federaalka Somaliya ku Laayeen Xuduuda Hiiraan iyo Xiisad ka Dhalatay +SAWIRO
Next articleargagax iyo quus soo wajahday dadka Lubanaa kadib burburkii magaalada Bayruut